ဧရာဝတီ| September 28, 2012 | Hits:5,904
| | မြန်မာပြည်တွင် ကျက်သရေဂုဏ်ရောင် မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်အောက်တွင် မြန်မာပြည် အကြောင်း ပြောမည်ဆိုလျှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းမှလွဲ၍ ဂုဏ်ယူချင်စရာ အကြောင်း ရှားပါးလွန်းခဲ့သည်။ မတရားမှု၊ မညီမျှမှု၊ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှု၊ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အထီးကျန်မှု၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ ခံရမှုများအကြောင်းများဖြင့်သာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာများနှင့် ပြည့်နေခဲ့ရသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Aung khin October 4, 2012 - 11:04 am	The editor failed to mention Thein Sein told the half truth during the interview with Asia Society in USA recently. The editor needs to listen to this interview again. Thein Sein said the economy of Burma was affected by sanctions whereas Aung Sann Suu Kyi said sanctions only affected Burma politically. Quoting IMF, Suu Kyi said the economy was bad due to mismanagement.